जानीराख्नुस, खानका लागि कुन तेल ठीक ? – Halkhabar kura
१५ भाद्र २०७७, सोमबार ०९:३८
जानीराख्नुस, खानका लागि कुन तेल ठीक ?
मलाई धेरैले एउटा साझा प्रश्न सोध्ने गर्छन्– ‘कुन खानेतेल स्वास्थ्यका लागि ठीक होला ? ’ धेरै मानिस तेल, घिउ, बोसोलगायतका चिल्लो खाद्यपदार्थ र कोलेस्ट्रोलका बारे भ्रममा परेका देखिन्छन् ।
उता टेलिभिजनको पर्दामा ‘तोरीको तेलले मुटु बलियो बनाउँछ’ भन्ने खालको विज्ञापन पनि देखिन्छ । बजारमा किन्न जाँदा सूर्यमुखी तेलको सिसीमा ठूलो–ठूलो अक्षरले ‘शतप्रतिशत कोलेस्ट्रोल फ्री’ लेखिएको देखेपछि यो नै स्वास्थ्यवद्र्धक रहेछ भन्ने लाग्छ ।
यस्तै प्रकारले ओलिभ, मकै, भटमास, नरिवल, बदामलगायतका तेलहरु पनि आकर्षक बोतलमा देख्न पाइन्छ, जसका कारण उपभोक्ताहरु यो किन्ने कि त्यो किन्ने भनी अन्यौलमा पर्छन् ।
तेल–घिउको फाइदा र बेफाइदाको कुरा गर्दा यिनीहरुको दैनिक खाने मात्रा थाहा पाउनुपर्छ । तेल होस् वा घिउ होस्, दैनिक ३ चिया चम्चा (१५ ग्राम) सम्म खानु उपयुक्त हुन्छ । यो भन्दा धेरै खाँदा हानि पुग्न सक्छ ।
७. हामी नेपालीहरुका लागि शुद्ध तोरीको तेल र घिउ खाना पकाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम छ । किनकि यिनीहरुमा पौष्टिक तत्वहरु पनि बढी पाइन्छ, स्मोक प्वाइन्ट पनि बढी छ, धेरैपल्ट तताउँदा पनि बिग्रिँदैनन् र हामीलाई यिनीहरुको स्वाद पनि मीठो लाग्छ । तर दैनिक १५ ग्रामभन्दा बढी नखाएकै राम्रो हुन्छ । न्युज अफ नेपाल बाट
Previous कोरोना कहर: कुवेत भिसाको अवधि थप तीन महिना बढ्यो
Next माछा पोखरीमा करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु